Maxkamadda sare ee Kenya: Toddobaadkan ayaan caddeyneynaa cidda Wajeer xukumi doonta - Halbeeg News
Maxkamadda sare ee Kenya: Toddobaadkan ayaan caddeyneynaa cidda Wajeer xukumi doonta
WAJEER(HALBEEG)-Maxkamadda Sare ee Kenya ayaa la filayaa in ay xukun kama danbeys ah kasoo saarto
Dacwad hortaallay in muddo ah oo ku saabsan muran ka dhashay cidda ku guuleysatay kursiga guddoomiyaha Wajeer. Kursiga ayaa waxaa ku muransanaa, Axmed Cabdullaahi iyo Maxamed Cabdi Maxamuud.
Warsaxaafadeed ay soo saartay maxkamaddu ayay ku sheegtay in go’aanka xukunka la soo bandhigi doona maalinka Jimcaha ah ee ay taariikhdu ku beegan tahay 15-ka bisha Febraayo 2019.
Axmed Cabdullaahi ayaa dacwaddan gudbiyay 6-dii bishii Sebteember 2017-kii isaga oo ka soo horjeeda natiijada doorasho ee ka dhacay Wajeer taas oo lagu sheegay in uu ku guuleystay Maxamed Cabdi Maxamuud.
Maxkamadda ayaa horaantii todobaadkan iska fogeysay eedeyn ay u soo jeediyeen qaar kamid ah waxgaradka Wajeer taas oo la sheegay in ay dib u dhigeyso go’aan ka gaarista dacwadda ku saabsan doorashadii ka dhacday Wajeer ee guddiga doorashadu sheegeen in uu ku guuleystay Maxamed Cabdi Maxamuud.
12-kii Janaayo ee sanadkii hore ayey Maxkamadda sare go’aan ka gaartay dacwaddan wax ayna xukuntay in uu doorashada ku guuleystay Axmed Cabdullahi Maxamed, balse Maxamuud ayaan ku qancin go’aanka maxkamadda wax uuna qaatay racfaan iyadoo dacwadiisa loo dib dhigay bishii Abriil ee sanadkii la soo dhaafay.
Maxamuud, ayaan sidoo kale ku qancin go’aankii maxkamadda racfaanka wax uuna markale buuxiyay dacwad hor leh ka hor 7-dii bishii May ee sanadkii la soo dhaafay.
Dacwadda ayaana mar kale dib loo dhageystay 21-kii Novembeer ee sanadkii la soo dhaafay ee 2018.
Si kastaba ha ahaatee maxkamadda ayaa hadda looga fadhiyaa iney soo saarto go’aankii kama dambeysta ah, waxayna maxkamadd lafateedu xaqiiisay in ay todobaadkan shaacin doonto natiijada rasmiga ah.
AMISOM oo maanta Muqdisho ku soo bandhigeysa qorsheheeda bixitaanka kadib
Wasiirrada cusub ee Butlaan oo maanta la dhaariyay